Dhaliil culus oo loo jeediyey hoggaanka xisbiga Miljöpartiet - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhaliil culus oo loo jeediyey hoggaanka xisbiga Miljöpartiet
La daabacay fredag 25 november 2016 kl 10.08
Birger Schlaug iyo Lotta N Hedström, waxay horey u soo noqdeen hoggaamiyaasha xisbiga MP intii u dhaxeysay 1990-2000. sawir: Jonas Ekströmer/TT, Sören Andersson/TT
Sideed ka mid ah hoggaamiyaal horey u soo maray xisbiga Miljöpartiet ayaa dhaliil culus dusha uga tuuray hoggaanka hadda ee xisbiga Miljöpartiet.
Qoraal ay hoggaamiyaashan hore ku qoreen wargeyska Dagens Nyheter ayey ku dhaliileen hoggaanka maanta in uu baalmaray mowqifka iyo mabaadiida xisbiga u degsan. Sidoo kale hoggaanka xisbiga ee hadda uu shaabuuga la dul taagan yahay xubnaha xisbiga ee dhaleeceysan sida ay wax u socdaan. Iyo in maanta xisbiga qarka u saaran yahay xaalad cakiran.
Hoggaamiyaasha hore ee xisbiga Miljöpartiet ee maanta warqadda ku daabacay Dagens Nyheter waxaa ka mid ah Birger Schalug, Pär Gahrton, Eva Göes iyo Lotta Hedström. Waxay qoralkooda ku sheeegan in hoos u dhaca taageero xisbiga ay sabab u tahay taageeryaashii laf-dhabarka u ahaa xisbiga oo aad u sii yaraanaya oo maraysa heerkii ugu hooseysay weligeed.
"Dowlad ka mid ahaansha micnaheeda ma ahan keliya in aad miiska wado fariisatiin ruux aa kalo mabda tahiin balse waa in aad sidoo kale dhowrtid mustaqbalka xisbigaaga iyo qorsheyaasha siyaasadeed ee ay tahay in uu xisibgu ku howl-galo doorashada soo socota", ayey tiri Lotta Hedström oo ka mid ah hoggaamiyaashii horey soo maray xisbiga illaa iyo 1990-2002.
”Weligeen sidaan oo kale isguma aanan waafaqanin walwalka aan ka qabno mustaqbalka xisbiga iyo sida ay wax u socdaan” ayey warqadda u qoreen hoggaamiyaashii hore xisbiga.
”Waxaa moodaa hogganka xisbiga iyo golaha dhaxe ee xisbiga si aan laga fiirsan in ay iska dheereeyaan dhaliilaha loo jeediyo, halka guuldarada ay ka dhigtaan horumar, mabaadiida xisbigana la baalmaray iyadoo la dhowrayo dowladda ka mid ahaansha balse aan wax nurux leh aan loogu baddelan haddii ay ahaan la heyd arrimo siyaasad ama wax u daneynaya mabaadida aas’aasiga ah ee xisbiga", ayey ku qoreen bogga doodaha ee wargeyska DN sideed hoggaamiyaal horey u soo maray xisbiga Miljöaprtiet.